112.73 ¥/$ (5 p.m.) Robert Mugabe
Zimbabwe’s veteran leader Robert Mugabe once quipped that he would rule his country until he turned 100. On Saturday, his ruling ZANU PF party endorsed the 92-year-old leader as its candidate for the 2018 presidential election, bringing him closer to achieving his wish. From ...	World	Aug 27, 2016
Riot police in Zimbabwe fired tear gas, beat up protesters and blocked off the site of an opposition rally in Harare on Friday, the latest in a string of demonstrations to hit the country. The rally — which was authorized by a court — ...	Politics & Diplomacy	Mar 28, 2016
Prime Minister Shinzo Abe gave Zimbabwe President Robert Mugabe a ¥600 million welcome to Japan in the form of an aid pledge intended to lure more Japanese companies back to the former agricultural powerhouse and counter an aggressive foray by China. But the move ...	Politics & Diplomacy	Mar 7, 2016
Crocodiles, Lacoste shirts, DNA tests and accusations of stealing underwear and radios. Sniping around these topics highlights the intensifying battles in Zimbabwe’s faction-ridden ruling party over who will succeed President Robert Mugabe, in power for 36 years. Mugabe, the world’s oldest head of state, ...	Politics & Diplomacy	Sep 16, 2015
Zimbabwe’s 91-year-old President Robert Mugabe read the wrong speech at the opening of a new session of parliament on Tuesday, repeating an address he gave to the legislature last month. The veteran leader read the 25-minute speech through to the end, apparently unaware that ...	Politics & Diplomacy	Dec 12, 2014
When veteran Zimbabwe leader Robert Mugabe sacked his vice-president in front of 12,000 baying party members last week, Emmerson Mnangagwa sat quietly in the crowd, a green baseball cap pulled low over his eyes. The man who stood to gain most from the departure ...	Politics & Diplomacy	Dec 11, 2014
Zimbabwe's 'Crocodile' likely to replace Mugabe; ruthless Mnangagwa also has a history of pragmatism
Zimbabwe Justice Minister Emmerson Mnangagwa, a secretive hardliner known as “the Crocodile,” is well placed to succeed Africa’s oldest head of state after President Robert Mugabe appointed him as one of the two vice presidents on Wednesday. Mnangagwa, a close ally of Mugabe since ...	Politics & Diplomacy	Dec 3, 2014
Ninety-year-old Zimbabwe President Robert Mugabe is literally paving the way for his wife’s ascent to power. In another sign of the first lady’s growing clout, Harare residents awoke on Tuesday to a new street, Dr. Grace Mugabe Way, leading to the conference center where ...	Politics & Diplomacy	Nov 23, 2014
President Robert Mugabe has changed the constitution of his ruling ZANU-PF party to allow him to directly appoint his deputies, giving the 90-year-old sole power to anoint his successor, party sources said Sunday. Until now Mugabe and his two ZANU-PF deputies have been elected ...	View older articles	The Japan Times ST